Umaki: max tetrault | Martech Zone
Umaka: max tetrault
Kukholwe noma ungakukholwa, zonke izivakashi eziya kusiza sakho aziyona into oyifunayo. Uma wenze imali ngesiza sakho ngezikhangiso ezivela eceleni, lezo zinkundla zokukhangisa zidinga amazinga wokuguqulwa ukuze abe nempilo futhi akhombise izikhangiso kubavakashi abafanele. Inani lokuvelayo nezindawo kusayithi lakho zaziwa njengokusungulwa kwesikhangiso sakho. Yini iTraffic Esele? Njengoba izikhangiso ezithengiwe ziqondisiwe, kuthiwani ngezivakashi ezisele ezingakhonjwanga? Umgwaqo lowo uyaziwa